Nagarik News - जेलको चिसो छिँडी रुङ्नेहरू
Tuesday 18 Jestha, 2073 | Menu	राजनीतिअर्थसमाजकलाखेलविश्वप्रवासप्रविधिस्वास्थ्यविचारअन्तर्वार्ताब्लगहोमपेज	शुक्रबार	राजनीतिअर्थसमाजकलाखेलविश्वप्रवासप्रविधिस्वास्थ्यविचारअन्तर्वार्ताब्लगहोमपेज
होमपेज / शुक्रबार / जेलको चिसो छिँडी रुङ्नेहरू
जेलको चिसो छिँडी रुङ्नेहरू	19 May 2013 आइतबार ५ जेष्ठ, २०७०
डी. विनोद	Be the first to comment! 12345 (1 Vote)
राप्कोट, स्याङ्जाका राजकुमार काफ्ले महिलासँग अनैतिक सम्बन्ध राखेको अभियोगमा अहिले साउदीको अरेबियाको मलाजस्थी जेलमा छन्। वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी पुगेका उनलाई महिलाहरूसँग अनैतिक सम्बन्ध राखेको अभियोगमा साउदी प्रहरील पक्राउ गरेको थियो। उनका परिवारले छुटाउनका लागि कूटनीतिक पहल गरिरहेका छन्। साउदीस्थित दूतावासले पनि उनीमाथि लागेको अभियोग हटाउन पहल गरिरहेको छ। तर, साउदीमा प्रतिबन्ध गरिएको महिलासँगको अनैतिक सम्बन्धमा उनको संलग्नता देखिएको भन्दै स्थानीय प्रहरीले उनीमाथि मुद्दा चलाएको थियो। साउदी अरेबियामा काम गर्न गएका नेपालीहरू विभिन्न अभियोगमा जेल परेका छन्। हत्या, चोरी आदि अभियोगका साथै मादक पदार्थ सेवन गरेको आरोपमा पनि जेल पर्ने नेपाली थुप्रै छन्। साउदीमा रहेका झन्डै पाँच लाख नेपालीले त्यहाँ काम र माम मात्रै पाएका छैनन्। त्यहाँको कानुनबारे राम्रो जानकारी नपाएका कारण विभिन्न अभियोगमा जेल बस्न बाध्य भएका छन्। खासगरी घरमा श्रीमती छाडेर जानेहरू विभिन्न मुलुकबाट गएका महिला कामदारसँगको अनैतिक सम्बन्धका कारण जेलमा बस्न बाध्य छन्। यस्तै अभियोगमा अल हायरस्थित जेलको चिसो छिँडीमा रात काटिरहेका छन्, चितवन, जगतपुरका सुनील मल्ल। उनलाई पनि अनैतिक सम्बन्ध राखेको अभियोग लागेको छ। उनी आफूलाई फसाइएको बताउँछन् तर साउदी प्रहरी मान्न तयार छैन। उनीसँगै उक्त अभियोगमा फैजु रहमान, ऋषिराम चालिसे आदि पनि जेलमा छन्। त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासले उनीहरूमाथि लागेकोे अभियोगबारे बुझ्ने प्रयास गरेको छ। त्यसबाहेक साउदीमा रहेका नेपाली संघसंस्थाले पनि उनीहरूको अभियोगबारे बुझ्ने प्रयत्न गरिरहेको त्यहाँस्थित दूतावासले जनाएको छ।साउदीका विभिन्न जेलमा रहेका ८२ जनाभन्दा बढीको नाम दूतावासमा पुगिसकेको छ। उनीहरूमाथि अनैतिक सम्बन्धको अभियोग मात्र छैन। हत्या, मादकपदार्थ सेवन, चोरी, दुर्घटना गराएको लगायत अभियोग पनि छन्। मलाजस्थित जेलमा रहेका दलबहादुर कामीलाई हत्या अभियोग छ। स्थानीयको हत्या गरेको अभियोगमा उनी जेलमा छन्। उनको रिहाइका लागि पनि नेपाली दूतावासले प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। उनी मात्र होइनन्, हत्या गरेकै अभियोगमा जितबहादुर परियार पनि उनीसँगै थुनामा छन्। उनले कसको हत्या गरे भन्ने चाहिँ साउदी प्रशासनले खुलाएको छैन। नेपालमा प्रहरी रिपोर्ट बनाएर स्वच्छ छविको प्रमाणपत्र लिए पनि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपाली कामदार विभिन्न अपराधका आरोपमा जेल पुगेका छन्। सामान्यतया दुर्घटनाको अभियोग लगाइएकाहरूका लागि पहल गर्न सहज भए पनि हत्यालगायत उक्त मुलुकमा वर्जित काम गरेका अन्यलाई भने नेपाली प्रशासनले छुटाउन मुश्किल हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा उक्त देशको कानुनबारे बुझ्नु अनिवार्य छ। तर धेरै नेपालीले विदेशका कानुन नबुझेकाले थुनामा पर्ने गरेका छन्। नेपालको स्थायी ठेगाना खुल्न नसकेका मेघनाथ भुसाल कम्पनीमा पैसा चोरीको अभियोगमा जेल हालिए। कम्पनीले उनीमाथि रकम चोरीको अभियोग लगायो र साउदी प्रहरीले मलाज जेल चलान गरेको थियो। त्यस्तै इलेक्ट्रिक केबल हराएको अभियोगमा विष्णुकुमार र कुलबहादुर पनि जेल जानुपर्‍यो। यस्ता थुपै्र प्रकारका अभियोगमा नेपालीहरू जेल पर्ने गरेका छन्। यी आपराधिक मुद्दामा जेल चलान नै गरिएका र मुद्दाको तयारी भएका केही उदाहरण हुन्। उनीहरूको बचाउका लागि दूतावासले साउदी सरकारसँग बारम्बार आग्रह गरिरहेको छ। दैनिक ६० जना नेपाली साउदी प्रहरीको कस्टडीमा पुग्छन्। नेपालबाट वैधानिक रूपमा साउदी पुगे पनि त्यहाँ अवैधानिक हुने कारणले पनि नेपालीको यत्रो संख्या दैनिकजसो पक्राउ पर्ने गरेको साउदीका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले बताए। पछिल्लो पटक साउदी सरकारले भगुवा कामदार लिने कम्पनीलाई एक लाख रियाल जरिवाना र मालिकलाई दुई वर्ष जेल सजायको नियम ल्याएपछि अवैधानिक रूपमा काम गरिरहेका कम्तीमा ६० देखि ७० हजार नेपाली कामदार अहिले समस्यामा परेको राजदूत पाण्डेले बताए। 'नेपाल सरकारले उनीहरूको सुरक्षाका लागि साउदी सरकारसँग आममाफीको प्रस्ताव नगरे नेपाली कामदार अलपत्र पर्ने क्रम बढिरहनेछ,' पाण्डे भने। उनले विभिन्न अभियोगमा जेलमा रहेका नेपालीको उद्धारका लागि पनि दूतावास सक्रिय भएको बताए। बानीले पुर्‍यायो जेल खाडी मुलुक कतार र साउदी अरबमा सुर्तीजन्य, नशाजन्य पदार्थको सार्वजनिक प्रयोगलाई निषेध गरिएको छ। तर नेपाली कामदारले आदतवश उक्त कानुन तोड्ने गर्दा उनीहरू जेलसम्म पुगेका छन्। साउदीमा कार्यरत रामबहादुर तामाङको मादक पदार्थ सेवन गर्ने लतले उनलाई जेलसम्म पुर्‍याएको छ। उनको यो आदतका कारण उनी अहिले साउदीको मलाजस्थित जेलमा बस्न बाध्य छन्। 'साउदीको कानुन थाहा नपाउँदा समस्या भएको हो,' उनलाई उद्धृत गर्दै पीडित परिवारले जनाएको छ।उनीसँगै उही अभियोगमा सुवास तामाङ पनि जेलमा छन्। 'मादक पदार्थ सेवन गर्ने बानी आफैँमा राम्रो होइन,' एक दूतावास अधिकारीले भने, 'त्यसमाथि साउदी अरबको कानुन नबुझी नेपालजस्तो जहाँ पायो त्यहाँ गल्ती गर्दा नेपाली समस्यामा छन्। यही अभियोगमा साउदीमा कार्यरत सोम राम, शेरबहादुर भण्डारी, काशीराज राईलगायत अहिले पनि जेलमा छन्।'मादक पदार्थ सेवन गरेकै अभियोगमा मात्र तीन दर्जनभन्दा बढी नेपाली युवा जेलमा रहेको आधिकारिक जानकारी दूतावासमा पुगेको छ। ती दूतावास अधिकारीले भने, 'यीबाहेक अरू ठाउँका जेलमा पनि नेपाली रहेको सुनिएको छ तर त्यसको आधिकारिक पुष्टि हुन सकेको छैन।' साउदी अरबमा सार्वजनिक ठाउँमा मादकपदार्थ सेवन गर्नु गैरकानुनी काम हो। ...नीलडाम कमाएर फर्किनेहरू गत वर्ष पैसा कमाउन मलेसिया पुगेका थिए, ओखलढुंगाका पदमबहादुर खत्री। उनीसँगै रुकुमका नारायण सुनुवार र काठमाडौँका अकलबहादुर बम्जन पनि मलेसिया पुगेका थिए। उनीहरूले सुरुका दिनमा रूख काट्ने काम पाएका थिए। तर त्यही क्रममा मलेसियाको प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो र जेल हालेको थियो। 'एघार महिना जेल बसियो। त्यहाँको यातना यति धेरै थियो कि त्यसको चर्चा गरेर साध्य छैन,' पदमबहादुरले भने, 'हामीले यातना मात्र पायौँ। किन जेल हालेको भन्नेसम्म पनि थाहा पाएका छैनौँ।' उनीहरूको शरीरभरि घाउ छ। मलेसियाको सावा जेलमा कैदी हुँदा उनीहरूले साह्रै दुःख पाए। वालकुमारीस्थित इन्टरनेशनल मेनपावरले न्यूनतम तलब आठ सय रिंगिट दिने भन्दै गार्डेनर भिसामा ४० हजार रुपैयाँ लिएर पदमबहादुरलाई मलेसिया पठाएको थियो। तर मलेसियामा भनेको काम नदिई उनलाई रूख काट्ने काममा लगाइएको थियो। पदमबहादुरसँगै काम गर्ने नारायण सुनुवार कनेक्शन म्यानपावरबाट मलेसिया पुगेका थिए। उनलाई पनि रूख काट्ने काम लगाइएको थियो। 'प्रहरीले किन समात्यो भन्नेबारे जानकारी पाइनँ,' उनले भने। ह्युमन मेनपावरबाट नर्सरी कामदारको भिसामा ६५ हजार रुपैयाँ बुझाएर मलेसिया पुगेका अकलबहादुर बम्जन पनि रूख काट्ने काममा लागे। उनले पनि अनाहकमा जेल बस्नुपर्‍यो। नेपालमा खर्च गरेर पैसा कमाउन पुगेका उनीहरू शरीरभरि चोट बोकेर फर्किएका छन्। उनीहरूले एउटै स्वरमा भने, 'पैसा हैन, पीडा कमाएर फर्कियौँ।' काममा जानेलाई टिप्स–मान्यताप्राप्त संस्थाबाट सम्बन्धित मुलुकको कामका बारेमा अभिमुखीकरण तालिम लिएर मात्र जानुपर्छ। –छापिएका विज्ञापनहरूको आधिकारिकताका बारेमा वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डमा जानकारी राखेर मात्र रोजगारीका लागि जानुपर्छ। –भिसा र कामको सम्पूर्ण कागजातसम्बन्धी पूर्ण जानकारी पछि मात्र लागत खर्च दिनुपर्छ। सरकारी निकायले तोकेअनुसार पैसा दिनुपर्छ। –मलेसिया जाने कामदारले विभिन्न प्रकारका चिट्ठा कार्यक्रम खेल्नु हुँदैन। टोटो नाममा खेलाइने चिट्ठामा रकम लगानी गर्दा कमाइ गुम्ने खतरा हुन्छ। –काममा पुगेको सम्बन्धित मुलुकको श्रमसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था जानुअघि बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ। गएपछि अलपत्र नपर्नका लागि उक्त जानकारी आवश्यक छ। –अनिवार्य अभिमुखीकरण तालिमसहित आफू रोजगारीका लागि जान लागेको मुलुक, कामको प्रगति, दूतावासबारे जानकारी राखौँ। –गैरआवासीय नेपाली संस्था भए/नभएको बारे जानकारी राखौँ। –स्वास्थ्य राम्रो बनाएर मात्र जाऔँ। झुटो स्वास्थ्य रिपोर्ट बनाउँदा जोखिम हुने हुँदा इजाजतपत्र पाएको स्वास्थ्य संस्थामा मात्र राम्रो चेकजाँच गराई रोजगारीमा जानुअघि चिकित्सकसँग सल्लाह गरौँ। –वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डबाट सल्लाह र परामर्श लिएर मात्र विदेश जानुपर्छ। Tweet Leaveacomment Message *
'झुम्की' बन्दै रिश्माफिल्म 'कबड्डी'को सफलतासँगै चर्चामा आएकी नयाँ अनुहार रिश्मा गुरुङ त्यसपछि अरू फिल्ममा देखिएकी थिइनन्। तर, सोझी थकाली युवतीको भूमिकामा दुरुस्तै देखिएकी रिश्मा अर्काे फिल्मका लागि अनुबन्ध भएकी छिन्। 'मात्र 'शो पिस' हुन चाहन्नँ'मिस नेपाल २०११ को ताज जितेपछि चर्चामा आएकी हुन्, मलिना जोशी। अघिल्लो वर्ष रिलिज फिल्म 'कलिउड'को एउटा गीतमा नृत्य गरेर फिल्म मोह दर्शाएकी थिइन्। भर्खरै रिलिज फिल्म 'ऋतु'मार्फत उनले हिरोइनका...	'पहिलो प्रेमपत्रले नै फेल खायो'रामचन्द्र अधिकारी (५९), कलाकार
गरिब किसान परिवारमा जन्मेको म। दुई कक्षासम्म मात्र पढ्न पाएँ। खेतीपातीमै सघाओस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो आमाबुबा। तर, मेरो मन खेतीतिर कहिल्यै गएन। सानैदेखि काम गरेर पैसा कमाउनुपर्छ भन्नेतिर...	फेरिँदै 'फगुवा'धीरे से रंगवा डाल हे राजाभितरी लागेला पाला होअर्थात्, बिस्तारै रङ हाल है, भित्र चिसो भयो। होलीअगावै यस्ता गीत गुञ्जिन थालेका छन् चोक र गल्लीहरूमा। होलीको परम्परागत संगीत 'होरी'को रूपमा...	रहेनन् 'हलो जोत्ने साथी''नेपाली लोक–गीत ओझेलमा पर्लान् भन्ने पिर लाग्छ,' गायक धर्मराज थापाको भनाइ उद्धृत गर्दै थिए, देउडा गायक नन्दकृष्ण जोशी, 'अहिलेका लोक–गीत, लोक–गीतजस्ता लाग्दैनन्। गाउँघरका भाकालाई जथाभावी शब्द हालेर बंग्याइएको छ।' केही...	अञ्जुका अधिकारका पक्षमासामाजिक सञ्जालमा अहिले गायिका अञ्जु पन्तलाई 'हिन्दू धर्म विरोधी'का रूपमा प्रचार गरिएको छ। वास्तविकता नबुझी एकतर्फी रूपमा फैलाएको अफवाहमा टेकेर 'हमलासम्म गर्ने' धम्की उनको फेसबुक र मोबाइलमा निरन्तर आइरहेका छन्।...	प्रेममा पैसाको चुरीफुरीप्रेमको पवित्रता, उच्चता र महानतामाथि यति धेरै लेखिएका र बोलिएका छन् कि अब यसबारे केही भन्न सायदै आवश्यक छ । तर, विडम्बना के छ भने प्रेमको खाँट्टी प्रतीक गरिबको झुपडी...	'मिस्ड कल'माथि गीत'मिस्ड कल' गरेर दुःख दिनुभन्दा 'कल' नै गर्नु जाती ठान्छिन्, अभिनेत्री सुष्मा कार्की। गायत्री थापाको 'लोक पप' गीत 'फोन गर मायालु मिस कल नगर'को म्युजिक भिडियोमा नाच्दै गर्दा उनले यस्तो...	शुक्रबार	'शृंगारले आत्मविश्वास बढाउँछ'शृंगारमा प्रयोग हुने फेसियल प्रोडक्ट 'आस्टाबेरी'ले नेपाली बजारमा आफ्नो हिस्सा जमाउँदै आएको छ। भारतीय उत्पादन आस्टाबेरीको...	बजेटपछि बिरामीजेठको धूप थेगिसाध्य थिएन। शीतल ताप्नेहरूले चौतारी खचाखच थियो। खेतमा डढेका मकै, सुक्दै गएका पानीका मुहान,...	बजेटपछि बिरामीजेठको धूप थेगिसाध्य थिएन। शीतल ताप्नेहरूले चौतारी खचाखच थियो। खेतमा डढेका मकै, सुक्दै गएका पानीका मुहान,...	एकताको लड्डुपछि फलामको च्यूराएकीकृत नेकपा माओवादीले आफ्नो पुरानो स्वरूपलाई ध्वस्त गरेर नयाँ नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा रूपान्तरण भएको घोषणा...	भर्खरै...
सेनानीको नाममा अक्षय कोष स्थापना
नेशनल मेडिकल कलेजमा राजश्व अनुसन्धानको छापा
मात्रा घटे पनि गलैँचा निकासीको आर्जन बढ्यो
राजनीतिकमा दुश्मन, व्यावसायिक साझेदारी
विद्यार्थीले मनाए वार्षिकोत्सव
एक महिनादेखि तीन विद्यार्थी गायव
संरक्षण क्षेत्रभित्र भरुवा बन्दुक फेला
छुटाउनु भयो कि	नेपाल–चीन घनिष्ट भएकाेमा चिन्ताकाठमाडौं– भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कंग्रेस आईले चीनसँग नेपालको बढ्दो घनिष्टताप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। भारतीय...	खस्कियो यार्साको कमाइदाङ/रुकुम- रुकुम, मैकोटका दलबहादुर पुनको 'यार्सा यात्रा' अघिल्लो वर्ष त्यति सुखद भएन। यार्सा खोज्न पत्नीसहित हिमाल...	ओली बजेटका १० विशेषता, वृद्ध भत्तादेखि पानी जहाजसम्मकाठमाडौं– संविधानसभाबाट घाेषणा भएकाे नयाँ संविधानपछिकाे पहिलाे सरकारले १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ कराेड रूपैयाँकाे पहिलाे...	३२ अर्ब चाहिने बुढीगण्डकीलाई ५ अर्ब ३५ कराेडकाठमाडौं– सरकारले आफैँले विकास समितिमार्फत् निर्माण गर्न लागेको १२ सय मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अागामी...	गणतन्त्र दिवस : चुनौतिका पाइलाकाठमाडौं- जेठ १५, २०६५ मध्यरात।'नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५९ बमोजिम गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव बहुमतले...	Nagarik News
About UsOnline SubscriptionContact UsAdvertise with us
Facebook TwitterRSS	भिडियोकार्टुनफोटो फिचरसर्च